संवैधानिक इजलासद्वारा प्रदेश कानुन खारेज - समाचार - कान्तिपुर समाचार
संवैधानिक इजलासद्वारा प्रदेश कानुन खारेज
कार्तिक १, २०७६ कृष्ण ज्ञवाली
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुसी पारिश्रमिक दिन मिल्नेगरी विभिन्न प्रदेश सभाहरुले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको छ ।
संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको हो ।
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ १३:५३
एनआरएनएको चुनावमा कसले कति मत पाए ?
काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी भएका छन् । उनले १ हजार २ सय १७ मत ल्याए भने प्रतिद्वन्द्वी कुल आचार्यले १ हजार ७० मत पाए छन् । यस्तै उपाध्यक्षमा डा बद्री केसी, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, मन केसी र सोनाम लामा निर्वाचित भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा रविना थापा विजयी भएकी छन् ।
यस्तै महासचिवमा डा. हेमराज शर्मा चुनिएका छन् भने दुईजना सचिवमा गौरीराज जोशी र आरके शर्मा निर्वाचित भए । कोषाध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठ र सह-कोषाध्यक्षमा लोकप्रसाद दाहाल निर्वाचित भएका छन् ।
हेर्नहोस् कसले कति मत पाए ?
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ १३:३२